DHEGEYSO-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo kahadlay colaada Sool. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo kahadlay colaada Sool.
Luulyo 6, 2016 11:21 g 0
(July 07 2016)-Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey, ayaa si kulul uga hadlay dagaal beeleedyada kadhacayey mudooyinkaani qaybo kamid ah gobolka Sool.
Waxa uu sheegay Camey in dagaalkaasi uu yahay mid naafaynaya gobolka aana xilligaan loobaahnayn, wuxuuna ugu baaqay waxgaradka labada beelood inay nabadda qaataan wixii horena iloobaan.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar ayaa shacabka Puntland ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ka shaqaynta nabadgalyadda iyo hormarka goboladda Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya oo masjidka Isbahaysiga kutukadey salaadii Ciida.